Izinto ezininzi ezifunyenweyo kwi-dietetics zixhomekeke kwingxelo eyaziwayo "iphupha yengqondo lizalela izilo": ngamanye amaxesha ayeswele ngokupheleleyo ukulungiswa kwezesayensi, kodwa ngokuvela kwabanye abantu ukufakelwa kwezinto eziqulunqayo kuya kubakhokelela kwaye babenzela ukuba banciphise isisindo malunga ne-panacea.
Phakathi kwezidlo ezinjalo - kunye nengqondo ye-Peter D'Adamo, imiqathango yenkcazo yesandi esicacisa kakhulu, nokuba yinto ebalulekileyo, ngoko kunzima ukuba ingcali ibe yinto ecocekileyo. Umbhali ungumqeqeshi, ugqirha we-naturopathic waseMerika kwisizukulwana sesibini; phantsi kokutya okuphuculweyo, akaphumelelanga ukuzama ukuzisa isiseko sesayensi. Ngaphantsi kwempembelelo yale mfundiso, kwakukho nje abo bafuna ukubeka ubungakanani babo ubunzima, kunye nabadlali bezemidlalo, ukuba ngubani na uluhlu olukhethekileyo lwemveliso efana ne "AV0" ebonakala kwiivenkile zokutya ezemidlalo. Kuphela isayensi apha akwanele - ngoko ke, nangayiphi na imeko, abagxeki abaninzi beengcamango zesondlo ngebango leqela legazi.
Ngokwale ngqungquthela, igalelo legazi libeka iimeko ezibalulekileyo ebomini bomntu, umzekelo, ukhetho lwesitayela sokutya, inani lokutya eligqityiweyo, ulawulo olufanelekileyo lomhla, impendulo yokuxinezeleka kunye nezindlela zokumelana nayo, iindlela zokuqinisa umzimba.
Umbhali "ufumene" isitshixo ekuqondeni indima yeqela legazi kwimisebenzi yabantu kwindalo yabantu. Ngaloo ndlela, igalelo legazi lam libhekwa njengowokudala, iqela lesibini lidibaniswa nokuqala kwefama, ukubonakala kweqela le-III kubangelwa ukuhamba kwabantu kwiindawo ezikumantla kunye nesimo sezulu esiphezulu, kunye neqela IV ngokuqhelekileyo kuba ngumphumo wokudibanisa amaqela achasayo. Kwaye xa ukhetha iimveliso zokutya, ubuchule be-erythrocytes ukubopha kwizinto ezahlukeneyo kuthathwa ingqalelo, oko kukuthi, ukusetyenziswa kweemveliso "zangaphandle" kwiqela labo legazi kubangele ukuba "i-gluing" yamaphrotheni e-plasma enezinto zegazi kunye nokuzaliswa komzimba ngeesxibisi. Yaye isondlo, ingqalelo kwiqela "igazi" lakhe, ngokuchaseneyo, lihlambulula umzimba kwaye ngokukhawuleza lilinganisa isisindo.
Abantu abanokuqala - i-oldest - yeqela legazi (0) lingehlobo "labazingeli", ngokulandelanayo, kufuneka badle ikakhulu ukutya kokutya. Abo baneqela lesibini legazi (A) bangabalimi "kwaye kufuneka bahambelane nesidlo semifuno. Bobabini kunye nabanye banconywa ukuba basuse ngokupheleleyo iimveliso zobisi ekudleni. Abantu abaneqela legazi lesithathu (B) bahlelwa njenge "nomads" kwaye "bagwetywa" ukulahla iimveliso ngokusekelwe kukutya, kodwa kufuneka badle iimveliso zobisi. Kwaye abanikazi beqela lesine legazi (AB), ababizwa ngokuba "ngabantu abatsha", okufuneka ukuba badle ngokuyinkunzi imvana, inyama yokutya, imveliso yobisi, izityalo kunye neziqhamo.
Oogqirha baseRashiya basoloko bexubusha malunga nokutya kunye nokufaneleka komqhubi walo, kunye nakwezinye ihlabathi iindawo ezilandelayo zale ngqungquthela ziye zazingekho ngokungqalileyo kwaye zakudala zibizwa ngokuthi "isayensi kodwa inzululwazi".
Ukugxekwa kwengcamango yesondlo kwiqela legazi kusekelwe "kwimbali yembali." Umbhali uthembele kwimbono kaLudwig Hirtzfelda, ejongene nemvelaphi ehambelanayo yamacandelo onke egazi - kwaye yena ngokwakhe ugxeka ngokugqithisileyo ngabazinzulu abaninzi. Ukwenqaba le ngqungquthela kubhubhisa isiseko apho isondlo sakhiwa khona. Yaye ngubani na ongathethi ngokuqinisekileyo ukuba abazingeli abazange bahlanganyele ekuzingeleni kunye nokuzingela, kwaye babengadli ukutya kokutya kwemifuno? Kwaye a mafama awakwazi ukudibanisa imveliso yezolimo kunye nokuzaliswa kwemfuyo, kwaye kwiminyaka ephilileyo kwaye ubuyele ekuzingeleni? Amabango malunga nokusetyenziswa kohlobo olufanayo lokutya abanikazi beqela elinye legazi abanalo.
Ukuba nemfundo yezokwelapha, u-D'Adamo wayebophekile ukuba azi iindibano ezahlukana ngamaqela amane egazi. Kutheni akazange aqwalasele iR Rh? Ukongezelela kwi-Rhesus antigens, kusekho ama-antigens anesibhakabhaka, kunye nama-antigens amaninzi e-leukocyte, izicubu kunye ne-plasma-ngokuqwalaselwa kwabo, ngoku unokubala malunga namaqela amane egazi (i-Duffy, Kell, i-Kidd, i-MNSs), kodwa umbhali wayeqwalasele kuphela amandla ukubopha amangqamuzana egazi obomvu kwezinye izinto.
Iiprotheni ezivela ekungeneni kokungena kwigazi kungekhona kwimo yayo yangaphambili, kodwa zihlukaniswe zibe zi-amino acid - zikhona malunga namakhulu mabini. Ukubunjwa kweeprotheni ezahlukeneyo kuyahlukileyo, kodwa akukho "iithegi" kwiimodemu ze-amino acid ezingenakuguqulelwa, zivela phi uhlobo lweeprotheyini ezifunyenweyo - ubisi, imifuno okanye inyama.
Enyanisweni, i-Adamo yatshintsha indawo yegama elithi "amino acids" kunye ne "lectins," kodwa ingqungquthela yabo iyinkimbinkimbi: ezi "proteins" ezibaluleke kakhulu ekuqaliseni i-codetic genetic, kwaye indima yama-lectin esetyenziselwa ukucaciswa ngokupheleleyo namhlanje. Ukuthatha kwabo inxaxheba kuphela ekuqaphelisweni kwezicubu ezizimele ngamaseli ziyaziwa, ezibalulekileyo kumsebenzi wama-hormone. Kwaye ezinye i-lectin zenza i-erythrocyte igundane kumntu ngeendlela ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwiqela legazi. Kodwa ukudibanisa le nyaniso kunye nokutya kwakufuneka ukuba uzame okwangoku - ukubalwa kwenziwa kwimiqathango yenzululwazi, apho umntu oqhelekileyo kwisitrato awakwazi ukuqonda. Ngoko inzululwazi yatshintshwa yinto yesayensi ...
Inyaniso yokuba imeko yendalo yonke, kwaye ngoko ke iindawo ezichaseneyo zokutya, ilahlekile ayihlanganiswa kuphela neqela legazi. Ngokumisela ukutya kumntu othile, oogqirha baqhuba isifundo seemvelaphi zentlalo kunye nengqondo kunye nokuhlalutya ngokubanzi kunye nezifundo ukufumanisa isizathu sesifo.
Wazalelwa eUnited States, i-ADAMO ingcamango iphinda ihlolwe apho, kwaye uphando lubonise ukuba "ngokwenene, ipesenteji zabanikazi beqela elinye legazi libonisa ukuxhamla kokutya ezithile. Eli phesenti alikhulu kakhulu kwaye aliniki izizathu zezimvo ezingabonakaliyo. Ukusetyenziswa kokutya kwiqela legazi okanye akunalo nantoni na, okanye linikeza umphumo wesikhashana. " Izondlo ziqwalasela le ndlela ukuba ingabi nasisiseko sokwenzululwazi.
Ukukhethwa kwemveliso yokutya esekelwe kwiqela legazi kukukhokelela ekuphambukeni okuhlukeneyo kunye nokunyanzeliswa komzimba ngamacandelo athile-iivithamini, amaminerali, ukulandelela izinto - kumntu othile. Kucacile ukuba ukukhishwa ngokupheleleyo kweemveliso zobisi kuza kuphazamisa ukonakala kwe-calcium kwaye kunokukhokelela ekutheni i-osteoporosis, ukukhishwa kwenyama kuya kubangela ukuba i-anemia ngenxa yokungabi nantsimbi, njl njl.
Abahluphekileyo banqamle ukukhupha ama-pounds angaphezulu bakulungele ukukholelwa naluphi na ubuxoki kwaye uye nawuphi na onika indlela esheshayo yokunciphisa umzimba. Oku kudla ngokusetyenziswa ngabathengisi abazama ukufumana abantu abagqithiseleyo. Kwindlela yokuthengisa kwengxaki, akukho nto ihlawulelwayo - akukho mntu ukhansele imali. Kodwa umnqweno weengcali zentlungu ukuthengisa abantu ngemali yabo, iindlela zokungaziphendulela kunye nokulungiselela akunakubangela ukuba bazuze.
UKelel Izotova: ukusebenzisa i-oatmeal kwimpilo
Ukutya ngaphambi koqeqesho - kwindawo yokuzivocavoca
Itheyibhile yomthi weKrismesi enezandla zodwa kumncintiswano esikolweni nakwi-kindergarten, imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo
Iesaladi kunye nezitya zokuzalwa
Yintoni enokukunika uMgaqo-mali weNtsha ka-2018: ama-5 othanda nje!
Umphumo wokukhipha isisu kumaqabane
Inkukhu nge lentile
Oko kufuneka ukwazi malunga nokuzenzela okwenene
Yintoni iphupha lephupha